Ny praiminisitra Li Keqiang dia nitazona ny fivorian'ny mpanatanteraka tao amin'ny filankevi-panjakana tamin'ny 7 aprily, ho valin'ny toe-javatra lehibe ateraky ny valanaretina manerantany, nanapa-kevitra ny fivoriana fa hatao amin'ny antsasaky ny faran'ny volana jona ny foara faha-Canton faha-127. Ny Canton Fair dia iray amin'ireo foara voalohany lasa tontolo iainana ...
1. Voalohany, azafady mba lazao anay ny anaran'ny vokatra na raha tsy manana anarana ianao dia afaka mandefa sary anay, na azonao atao ny manamarina ny tranokalanay hahitanao ireo vokatra ilainao. 2. Omeo ny haben'ny antsipiriany momba ny vokatra ilainao? Wire Ny hateviny: ny refy / savaivay; ny fonosana: lanja, firy kilao ny iray ...
Ankehitriny dia miparitaka erak'izao tontolo izao ny virus Corona. Vao tsy ela akory izay dia nahazo vaovao be avy tamin'ny mpanjifa izahay momba ny toe-javatra misy ny fireneny. Fantatray fa ny sasany aminareo dia manahy momba ilay viriosy. Tamin'ny lasa dia niaina zavatra mitovy amin'ny niainanao izahay izao. Te hizara traikefa aminao izahay ab ...